Maskne ဆိုတာဘာလဲ – YANGON STYLE
Mask ကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ ဝက်ခြံဖြစ်တာမို့ Mask+acne ပေါင်းစပ်ပြီး Maskne လိုတောင် နာမည်သစ်ထွက်လာရတာပါ
ဝက်ခြံပေါက်လေ့ မရှိတဲ့ သူတွေတောင် မေးရိုးနဲ့ နှာခေါင်း Area တစ်ဝိုက်မှာ ဝက်ခြံတွေ ထွက်နေကြတယ်မလား?
မျက်နှာပေါ်က ‘Danger triangle’ လို့ခေါ်တဲ့ နှာခေါင်း နဲ့ ပါးစပ်နားတစ်ဝိုက် ဝက်ခြံဖြစ်တာကြောင့် နီမြန်းနာကျင်မှုတွေကြောင့် စိတ်ကသိကအောက် ပိုဖြစ်ရတာပေါ့
အခုတလော တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတိုင်းလိုလို မျက်နှာပေါ်က ‘Danger triangle’ မှာ ဝက်ခြံတွေထွက်လာတာကတော့ တိုက်ဆိုင်မှု မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
ဒါဆို ဒီလို ဝက်ခြံတွေဘာကြောင့့် ထွက်လာရတာလဲ?
Covid – 19 ရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့ mask တပ်ပြီးသွားလာရတာဟာ အခုဆို ပုံမှန်လိုပဲဖြစ်လာပါပြီ။
ဒါကြောင့်ပဲ မျက်နှာအရေပြား နဲ့ Mask ကအမြဲတမ်းထိတွေ့နေရတာမို့ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သတိမထားမိတဲ့ အသေးစား ပွတ်တိုက်မှုတွေက ပွန်းရှနီမြန်းလာပါတယ်။
Mask ကိုအမြဲလိုလိုတပ်ထားရတဲ့အတွက် အဆီတွေ ချွေးတွကို စုထားသလိုဖြစ်တာကြောင့် စိုထိုင်းဆပိုများပြီး bacteria တွေပေါက်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်
Maskne အဖြစ်အများဆုံးကတော့ Mask ကို အချိန်ပြည့် တပ်ထားရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်
Covid – 19 ကိုကာကွယ်ဖို့ mask ကို မဖြစ်မနေတပ်ရမယ့်အချိန်မှာ maskne မဖြစ်အောင် အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမလဲ ဆိုတာပြောပြပေးချင်ပါတယ်
တစ်ခါသုံး Mask တွေကို တစ်ခါပဲသုံးပါ။ 5နာရီ ခြားတစ်ခါလောက် Mask ကို လဲပေးပါ။
အဝတ် Mask ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အသုံးပြုပြီးတိုင်း မဖြစ်မနေ လျှော်ဖွတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မျက်နှာ သန့်ရှင်း စင်ကြယ်စေဖို့ Cleansing ကို သေချာလေး ဂရုပြုလုပ်ပေးပါ။
Make-up လိမ်းခြင်းက အဆီပြန်ခြင်းနှင့် ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်စေတာကြောင့် Make-up လိမ်းတာကို တက်နိုင်သမျှလျော့ချပေးပါ။
Mask နဲ့ အသားအရေ ထိတွေ့မှုလျော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ Skincare အဆင့်တွေနဲ့ Sunscreen ကို တော့ အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့ Skincare အဆ့င်မှာToner, Essence, Serum, Moisturizer တို့ပါဝင်ပြီး Skincare ရွေးခြယ်တဲ့ အခါမှာလည်း ရေဓာတ်ကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထားပြီး အရေပြားအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်မြန်ဆန်တဲ့ Skincare brand များကို ရွေးသင့်ပါတယ်
Sunscreen ရွေးရာမှာလည်း sun block အများစုက ချွေးပေါက်ပိတ်စေတာမို့ အသားအရေမှာ စေးကပ်တင်ကျန်ခြင်းမရှိပဲ Tone up ဖြစ်သွားစေတဲ့ အမျိုးအစားကို သေချာရွေးပြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်
အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မျက်နှာကို ချေးချွတ်ပေါင်းတင်ခြင်းမျိုးကို မပြုလုပ်သင့်သေးပါဘူး။ ချေးချွတ်ပေါင်းတင်ခြင်းက မျက်နှာအသားအရေကို နုသွားစေတာမို့ Mask တပ်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ အရေပြား ပွတ်တိုက်နီမြန်းမှု နဲ့ ဘက်တီးရီးယားပေါက်ဖွားဖို့အတွက် ပိုမိုအခွင့်အရေးများပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ လက်နဲ့ ထိတာညှစ်တာမျိုးတွေ လုံးဝမလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ညှစ်ထား ဖဲ့ထားတဲ့ ဝက်ခြံအသားအရေနဲ့ mask ပြန်ထိတဲ့ အခါ ပိုမိုဆိုးဝါးတဲ့ အရေပြား ပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ထပ်ပြီးမှာချင်တာကတော့ Mask တွေကို ၅နာရီခြားတစ်ခါ သို့မဟုတ် စိတ်ထဲညစ်ပတ်လာတယ်ထင်တာနဲ့ နောက်တစ်ခုလဲလိုက်ပါနော်။
အခုဆို Maskne နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်အရာတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာမို့
‘Maskne မပေါက် အလှမပျောက်ဘဲ စိုပြေတင်းရင် ပြစ်ချက်ကင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်’